कोरोना भाइरसले फोक्सोलाई कसरी असर गर्छ? धूमपान गर्ने किन बढी जोखिममा? - डा अशेष ढुंगानासँग भिडियो वार्ता
२०७७ बैशाख १६ मंगलबार १९:०२:४९ प्रकाशित
लकडाउनको एकमात्र सकारात्मक कुरा भनेको लकडाउले बाहिर हुने वायुप्रदुषण निकै कम गरेको छ। लकडाउने गर्दा अस्पतालमा आउने भिडभाड कम भएको छ। इमर्जेन्समा बिरामी धेरै आउने गर्नुहुन्छ। समान्य समस्या भएका बिरामीहरु त्यति अस्पताल आउनुभएको छैन। उहाँहरुले घरबाटै परामर्श लिइरहनुभएको छ। मैले जाँच गर्दै आएका बिरामीहरुले फोनबाटै परामर्श लिएर औषधि घटबढ गर्ने गर्नुभएको छ।
गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरु अस्पताल आइराख्नु भएको छ। लकडाउनको सुरुवाती दिनहरुमा बिरामी कम आउनुभयो तर आजभोलि भने क्रम बढेको छ। श्वाप्रश्वास सम्बन्धि सेवाहरु वीर अस्पतालमा सञ्चालित छन्।
सार्स कोभिड २ भन्ने भाइरस चीनको हुवानबाट सुरु भएर विश्वमा करिब १ सय ९० देशमा फैलिसकको छ। यो रोग एक किसिमको श्वाप्रश्वासको संक्रमण नै हो। यो मुखबाट नाकबाट भित्र छिरेर श्वासप्रश्वास प्रणालीमा यो भाइरस बस्छ र संक्रमण गराउने गर्छ। यसको मुख्य लक्षणहरु पनि श्वासप्रश्वास सम्बन्धी नै हुने गर्छन्।
कोरोनाबाट संक्रमित भएकाहरुलाई ज्वरो आउँछ, सुख्खा खोकी लाग्ने सास फेर्न गाह्रो हुने गर्छ। त्यो भन्दा अन्य लक्षणहरु पनि देखिने गर्छन्। कहिलेकाहिँ पाचनमा समस्या आउने, डाइरिया हुने र शरीर थाकेको महसुस हुने गर्छ। र, यसले संक्रमण गर्ने भनेको छातिमा हो। ८० प्रतिशत मानिसलाई निमोनिया नै नदेखिएर यो समस्या हुने गर्छ। १० देखि १५ प्रतिशतलाई कडा खालको निमोनिया देखिने गर्छ। ५ प्रतिशतलाई कडा खालको निमोनिया हुने गर्छ। जसलाई भेन्टिलेटरको प्रयोग गर्नुपर्छ। छाति सम्बन्धी जटिलता आएको देखिन्छ। कोभिड १९ को जोखिम फ्याक्टर हेर्ने हो भने एउटा ६० वर्ष उमेर भन्दामाथिहरुलाई देखिने गर्छ। बढ्दो उमेरका साथै उच्च रक्तचाप र मुटु सम्बन्धी रोग भएका, मधुमेह भएका र दीर्घ श्वाप्रश्वासका बिरामीहरुलाई कोरोना संक्रमण भएको पाइन्छ।
टीबी पनि आफैंमा छातिको संक्रमणको हो। कोभिड १९ पनि छातिको संक्रमण हो। टिबी भएका मानिसलाई छातिको समस्या हुने गर्छ। बिसीजी लगाएकाहरुलाई कोभिड-१९ हुँदैन भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रमाणित भएको छैन। अनुमान मात्र हो। बिसिजी लगाएका देशमा यसको प्रकोप कम देखिएको हो।
टिबी र कोभिड-१९ को लक्षण उस्तै भएपनि कोभिड-१९ मा १ सय ४ डिग्री भन्दा माथि ज्वरो हुन्छ। साथसाथै खोकी वा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या हुन्छ।
यो लक्षण पछिल्लो १० वा १५ दिनभित्र देखिएको छ भने यो कोभिडको लक्षण भयो । कुनै पनि खोकी दुई हप्ता भन्दा बढी लागिरहेको छ भन टिबीको लक्षण हो।
टिबीको सबै सेवा सुचारु छन्। सबै अस्पताल नखुलेकोले पहिचान गर्न गाह्रो भएको छ। औाषधि लामो समय दिएर गर्न सकिन्छ। सबै घरमा बस्ने भएकोले परिवारका अन्य सदस्यलाई सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
कोभिड १९ नयाँ रोग हो। यसका बारेमा ४ महिना भयो हामीलाई थाहा भएको। धुम्रपान गर्ने मानिसमा हुने जोखिमबारे अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ। जति पनि अनुसन्धान भएका छन्, धुम्रपान गर्नेमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या हुने र यो समस्या भएकाहरुमा कोभिड-१९ हुने सम्भावना बढी हुने देखिएको छ।
छाति सम्बन्धी समस्या भएका मानिसलाई धुम्रपानले बढी असर गर्छ। धुम्रपानले गर्नेलाई दम हुने सम्भावना बढी हुन्छ। छाति समबन्धी संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ। ती संक्रमणमध्ये कोभिड १९ पनि एक हो।
डा ढुंंगानासँग गरिएको भिडियो संवाद